Koox Soomaali ah oo ka badisay koox Kubadda Koleyga ka ciyaarta Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Koox Soomaali ah oo ka badisay koox Kubadda Koleyga ka ciyaarta Kenya
MAREEG 26 May 2016 26 May 2016
Koox Soomaali ah oo ciyarta kubadda Kolayga ayaa xalay ka badisay kooxda kubadda kulayga ee Co-operative Bank oo ka mid ah kooxaha ugu sareeya horyaalka Kubadda Kolayga ee dalka Kenya.
Kulanka oo ahaa mid saaxibtinimo, waxaa ka qeyb galay taageerayaal u badnaa Soomaali, danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, ku xigeenkiisa iyo ganacsato Soomaaliyeed.
Kooxda Soomaalida ah oo ka timid Woqooyiga Ameerika (Canada iyo USA) ayaa awood sarreysay ciyaarta, waxayna soo bandhigeen ciyaar xirfad leh.
Ciyaarta ayaa ku soo dhammaatay 62:93 oo ay guusha ku raacday kooxda Soomaalida ah. Tababraha kooxdan Axmed Yaasiin
ayaa sheegay in dhallinyaradan oo u ciyaara jaamacado iyo kooxo ka dhisan Mareykanka iyo Canada ay yihiin kuwo awooda in ay badiyaan kulammada u harsan ee ay ka qeyb gali doonaan.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo daawanayay ciyaarta ayaa saxaafadda u sheegay in wax lagu farxo ay tahay in dhallinyaro Soomaaliyeed oo xirfad sarreysa leh ay u soo baxaan waddankeena.
“Farxad ayay u tahay dadka Soomaaliyeed in ay arkaan dhallinyaro xirfaddaan leh oo guulo gaaraya, annaga safaarad ahaan aad ayaan u soo dhaweyneynaa” ayuu yiri danjire Jamaal.
Kooxdaan ayaa kulamo kale oo kooxeed ku yeelan doona dalka Kenya, ka hor inta aysan u bixin koxoda qaranka ee dalka Kenya toddobaadka soo socda.
Taliska booliska oo qalab ciidan ka guddoomay Talyaaniga “SAWIRRO”